SoShwe – Page 30
Vin Diesel နဲ့ The Rock တို့ “The Fast and The Furious” မှာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မလား?
ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Vin Diesel နဲ့ The Rock တို့နှစ်ယောက်အကြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူသိရှင်ကြား တင်းမာမှုတွေက အချိန်တော်တော်ကြာအောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီနှစ်ယောက်ကို သင့်မြတ်စေချင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Diesel က The Rock လို့လည်းခေါ်တဲ့ Dwayne Johnson ကို လေပြည်ထိုးလာခဲ့ပြီး “The Fast and The Furious 10” မှာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေက ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အပိုင်းအသစ်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီး Dwayne ကို ဒီဇာတ်ကားအတွက် လာရောက်ပူးပေါင်းရင်း ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Paul Walker ရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း …
၁။ Blood Red Sky သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့ Nadja ဟာ ကုသမှုခံယူဖို့ ဝေဒနာကို ကြိတ်ခံစားရင်း လေယာဉ်နဲ့ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပြန်ပေးဆွဲသူတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် လူသား သားငယ်လေးကို ကာကွယ်ဖို့ ပြန်ပေးဆွဲသူတွေကို ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ပြီး အဆုံးသတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲ? ၂။ The Fear Street Trilogy ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တာမျိုးနဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တာမျိုး ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ “The Fear Street” ကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အပိုင်း (၃) ပိုင်းပါပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ် ၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်နဲ့ ၁၆၆၆ ခုနှစ်တွေတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ …
Page 30 of 996« First...10202829303132»405060...Last »